कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनका लागि सातै प्रदेशमा तोक्यो संयोजक, को कहाँ ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनका लागि सातै प्रदेशमा तोक्यो संयोजक, को कहाँ ? » Nepal Fusion
कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनका लागि सातै प्रदेशमा तोक्यो संयोजक, को कहाँ ?
काठमाडौ २०७८ कार्तिक २९ गते सोमवार
नेपाली कांग्रेसले १६ र १७ मंसिरका लागि तय भएको सातै प्रदेशको प्रदेश अधिवेशनका लागि केन्द्रीय संयोजक तोकेको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले विधानले तोके अनुसारको संरचनाको अधिवेशनमा जानका लागि सातै प्रदेशका लागि आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै प्रदेश संयोजक तोकेको बताए।
जसअनुसार प्रदेश १ को संयोजक नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बनाइएको छ। यसै गरी प्रदेश २ को संयोजकको जिम्मेवारी रमेश रिजाललाई दिइएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशको संयोजकमा पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई तोकिएको छ भने गण्डकी प्रदेश अधिवेशनका लागि गोपालमान श्रेष्ठलाई संयोजक बनाइएको छ।
यस्तै लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँण संयोजक तोकिएका छन् भने कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई संयोजक बनाइएको छ।
कांग्रेसले प्रदेश १ को प्रदेश अधिवेशन विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, बागमतीको हेटौडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश २ का लागि संयोजक तोकिएका नेता रमेश रिजालले जानकारी दिए।